Kukho izinto ezimbini ezizityayo kwiqondo lokushisa ngokwezakhono zeeklasi 'okanye i-298 K (25 ° C) kunye neengqungquthela zesithandathu ezinokusetyenziswa kotywala kwindawo efanelekileyo yokushisa kunye neengcinezelo.
Izinto ezenziwe ziTywala kwi-25 ° C
Ukushisa kwegumbi ligama elichazwe ngokungaqhelekanga elingathetha naphi na kwi-20 ° C ukuya ku-29 ° C. Kwizenzululwazi, ngokuqhelekileyo kuthathwa njenge-20 ° C okanye i-25 ° C. Kulo bushushu kunye noxinzelelo oluqhelekileyo, izinto ezimbini kuphela ziinkonzo:
I-bromine (isimboli Br kunye nenombolo ye-athomu 35) kunye ne- mercury (isimboli Hg kunye nenombolo ye-atomic 80) zombini utywala kwindawo yokushisa. I-bromine ibomvu elinombala obomvu, elinamaqabunga angama-265.9 K. I-Mercury yinto enetyhefu yensimbi enobuthi, enezinga elingu-234.32 K.
Izinto Eziba Ngotywala 25 ° C-40 ° C
Xa iqondo lokushisa lifudumele kakhulu, kukho ezinye iimbalwa ezithe zafunyanwa njengotywala kwixinzelelo oluqhelekileyo:
I-Francium , i- cesium , i- gallium , kunye ne- rubidium zizinto ezine ezinyibilikisayo kumaqondo aphezulu kakhulu kunamaqondo okushisa .
I-Francium (uphawu kunye nombolo ye-atomic 87), isinyithi esine -radioactive kunye nesebenzayo, iyancibilika malunga ne-300 K. I- Francium yona nto ikhethwa yi-electropositive yazo zonke izinto. Nangona i-melting point iyaziwa, kuncinci kakhulu kule nxalenye kubakho ukuba akunakwenzeka ukuba uya kubona umfanekiso walolu hlobo kwifom ye-liquid.
I-Cesium (uphawu lweCs kunye nenombolo yesi-atomic 55), isinyithi esithambileyo esabela ngokukhawuleza ngamanzi, iyancibilika kwi-301.59 K.
Iqondo elincinci lokuncibilika kunye nokunciphisa i-francium kunye ne-cesium zibangelwa ubukhulu bee-athomu zazo. Enyanisweni, ii-athomu ze-cesium zikhulu kunezo naziphi na ezinye izinto.
I-Gallium (isimboli Ga kunye nenombolo ye-athomu 31), isinyithi esisiqhwala, iyancibilika kwi-303.3 K. I-Gallium inokutshatyathwa ngokushisa komzimba, njengokwesandla esisigxina.
Eli qela libonisa ubuthi obuphantsi, ngoko lufumaneka kwi-intanethi kwaye lunokusetyenziswa ngokukhuselekileyo kwiimvavanyo zenzululwazi. Ukongezelela ukuncibilika esandleni sakho, kunokutshintshwa kwi-mercury kwi- "heart beat" test kwaye ingasetyenziselwa ukwenza iipuni ezigqithisiweyo xa zisetyenziselwa ukuvuselela i-liquids eshushu.
I-Rubidium (isimboli Rb kunye nenombolo ye-atomic 37) yincinci ephothiweyo, emhlophe ephundukileyo, enezinga elincinci le-312.46 K. I-Rubidium igalela ngokukhawuleza ukwenza i-ribidium oxide. Njenga-cesium, i-rubididi ithatha inzondo ngamanzi.
Ezinye izinto eziTywala
Loo mbandela wento yento inokuthi iqikelelwe ngokusekelwe kwisicatshulwa sayo sesigaba. Nangona iqondo lokushisa lilawulwa lula, ukunyanzelisa ingcinezelo yindlela enye yokubangela ukutshintsha kwesigaba. Xa uxinzelelo lulawulwa, ezinye izinto ezicocekileyo zifumaneka kwiqondo lokushisa. Umzekelo i-halogen, i-chlorine.
Ziziphi izinto kwiBhunga laBantu?
Kutheni i-Lanthanides kunye ne-Actinides zihluke kwiTable Periodic
Iimpawu zeGesi ezintle, iMisebenzi kunye nemithombo
Uluhlu lweAlfabhethi lwezinto
Imfazwe Yehlabathi II: Ibhuloho e Remagen
Ubugcisa obuqhelekileyo eMandarin
Iimfazwe zamaKhrobha: Ukuvinjelwa kweYerusalem
Imibala Yengelosi: Ukukhanya kwamaRays of Archangels
I-BluePrint LSAT Izifundo
Imfazwe yaseVietnam: iMfazwe yaseHusser Hill
Iingcebiso zokwenza isiFundo seJamani siqine
Imithetho yokuHlalwa kweOlimpiki kunye neNqaku
Abafazi beHarlem Renaissance
Iimpawu, Imisebenzi, kunye nokulinganiselwa kweeDictionaries
Inkcazo kunye neMimiselo yohlobo lwesiNgesi ngegrama
Funda Indlela Yokuthi "Unina" ngesiMandarin IsiShayina
I-10 ye-Depeche Mode Iingoma
Ngaba kufuneka ndibonise iPolisa I-ID yami?
I-Novena ku-Saint Anthony kunoma yimuphi umfuno
Izihlandlo eziza kutshatyalaliswa